nkwari akụ | Otu Di na Nwunye
January 6, 2019 + England, Europe, Transportation, Nhazi njem, United Kingdom
Otu Nduzi nke Ndị njem na London Heathrow Airport
Nabata na Airport Heathrow. Ọdụ ụgbọ elu dị 20 kilomita ma ọ bụ 32 kilomita dị n'ebe ọdịda anyanwụ London, a makwaara na ọ bụ otu ọdụ ụgbọelu kachasị ọsọ n'ụwa, nke abụọ naanị Dubai. Enwere ụlọ ọrụ na ụlọ ezinaụlọ (yabụ ọ bụrụ na ị na-agagharị na nwa ọhụrụ, lezie anya maka ihe a mgbe a chọrọ ịgbanwe nwa gị). Enwere ntụrụndụ egwu ... GỤKWUO
December 5, 2017 + Europe, Hotels, Italy, Obere-Blog, Nyocha, Nhazi njem
Nyochaa: Residenza Ave Roma na Rom, Italy
Ịchọta ezigbo họtel na Rom bụ ihe ịma aka. Ntak-a? N'ihi na Rome buru ibu. E nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme. Ọtụtụ piazzas. Ọtụtụ ebe ngosi na ihe oyiyi. Ọtụtụ ụlọ akụkọ ihe mere eme. Dị ka ọ bụ otu ihe ka ọtụtụ ndị na-eleta, anyị chọrọ ịnọ n'ime obi - ma, olee ebe obi dị? Maka anyị, mgbe anyị nyochachara na nyocha, anyị kwenyere na anyị hụrụ ihe kacha mma ... GỤKWUO
April 7, 2017 + Europe, Hotels, Netherlands, Nyocha, Eme njem
March 10, 2017 + Europe, Hotels, Obere-Blog, Nyocha, United Kingdom
Review: Ibis London City Hotel - Shoreditch
London bụ obodo nwere ohere na-enweghị atụ maka nchọpụta na ntụrụndụ, yana nkà na akụkọ ihe mere eme. Na njem na-aga n'ihu na-ebuli elu na afọ ndị na-adịbeghị anya, ị ga-enwe nhọrọ na-adịghị agwụ agwụ maka hotels! Na njem anyị na-adịbeghị anya na-agafe ọdọ mmiri ahụ, anyị nọrọ n'ụlọ nkwari akụ Ibis London City, ebe na-atọ ụtọ ma na-adọta ebe dị nso na Whitechapel nke obodo ahụ. Nzọụkwụ ole na ole ... GỤKWUO